အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်သစ်အဖြစ် အိုဇေးလ်ကို မြင်တွေ့ရတော့မှာလား
Ozil ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ Unai Emery
29 Jul 2018 . 3:06 AM
အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြ အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery ဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ စိတ်ပျက်စရာတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ အိုဇေးလ် Ozil ကို စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်သွားဖို့ စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းကို (၅-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ICC ပွဲမှာ အူနိုင်းအမ်မရီက အိုဇေးလ်ကို အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး အိုဇေးလ်အနေနဲ့ အာဆင်နယ်ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် အသင်းခေါင်းဆောင်လက်ပတ် ၀တ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် နောက်ခံလူ ကိုစီယဲလ်နီ Koscielny ဟာ ဒူးဒဏ်ရာပြဿနာကနေ ပြန်သက်သာလာပြီဖြစ်ပေမယ့် အူနိုင်းအမ်မရီက အိုဇေးလ်ကို အမြဲတမ်းအသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ PSG နဲ့ပွဲမှာ တစ်ဂိုးသွင်းယူပြီး ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့ အိုဇေးလ်က “ဒီနေ့ပွဲမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ နိုင်ပွဲရခဲ့သလို စင်ကာပူပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကလည်း အံ့အားသင့်စရာပါပဲ”လို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တယ်။
အဲဒီပွဲအပြီး အူနိုင်းအမ်မရီကလည်း “ကစားသမားတွေကို တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီး အိုဇေးလ်ဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ် အသင်းခေါင်းဆောင်နေရာအတွက် ကစားသမား(၅)ဦးကို လျာထားပြီး အဲဒီအထဲမှာ အိုဇေးလ်၊ ရမ်ဆေး Ramsey ၊ ပီတာချက် Petr Cech တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်အသင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ တိုနီအဒမ် Tony Adams၊ ဗီယာရာ Vieira တို့နောက်ပိုင်း အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကစားသမားတော်တော်များများ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုတော့ မရခဲ့ပါဘူး။ တကယ်လို့ အိုဇေးလ်သာ အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် တိုနီအဒမ်၊ ဗီယာရာ တို့ရဲ့ခြေရာ နင်းနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
Ozil ဟာ အာဆငျနယျအသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈဖို့ အသငျ့ဖွဈနပွေီလို့ အတညျပွုခဲ့တဲ့ Unai Emery
အာဆငျနယျအသငျးနညျးပွ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery ဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ စိတျပကျြစရာတှေ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ကှငျးလယျလူ အိုဇေးလျ Ozil ကို စိတျဓာတျမွှငျ့တငျပေးတဲ့အနနေဲ့ အာဆငျနယျအသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ခနျ့အပျသှားဖို့ စီစဉျနပွေီဖွဈပါတယျ။ PSG အသငျးကို (၅-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ICC ပှဲမှာ အူနိုငျးအမျမရီက အိုဇေးလျကို အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ သတျမှတျပေးခဲ့ပွီး အိုဇေးလျအနနေဲ့ အာဆငျနယျကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ အသငျးခေါငျးဆောငျလကျပတျ ဝတျဆငျခှငျ့ရခဲ့တာပါ။
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ နောကျခံလူ ကိုစီယဲလျနီ Koscielny ဟာ ဒူးဒဏျရာပွဿနာကနေ ပွနျသကျသာလာပွီဖွဈပမေယျ့ အူနိုငျးအမျမရီက အိုဇေးလျကို အမွဲတမျးအသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ခနျ့အပျဖို့ ဆန်ဒရှိနတောဖွဈပါတယျ။ PSG နဲ့ပှဲမှာ တဈဂိုးသှငျးယူပွီး ခွစှေမျးပွကစားခဲ့တဲ့ အိုဇေးလျက “ဒီနပှေဲ့မှာ အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ခနျ့အပျခံခဲ့ရတဲ့အတှကျ ဂုဏျယူမိပါတယျ။ နိုငျပှဲရခဲ့သလို စငျကာပူပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကလညျး အံ့အားသငျ့စရာပါပဲ”လို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့တယျ။
အဲဒီပှဲအပွီး အူနိုငျးအမျမရီကလညျး “ကစားသမားတှကေို တာဝနျယူတတျတဲ့စိတျဖွဈအောငျ ကြှနျတျောတို့ စီစဉျဆောငျရှကျနပွေီး အိုဇေးလျဟာ အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျသူဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျ အသငျးခေါငျးဆောငျနရောအတှကျ ကစားသမား(၅)ဦးကို လြာထားပွီး အဲဒီအထဲမှာ အိုဇေးလျ၊ ရမျဆေး Ramsey ၊ ပီတာခကျြ Petr Cech တို့လညျး ပါဝငျပါတယျ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျအသငျးခေါငျးဆောငျတှဖွေဈတဲ့ တိုနီအဒမျ Tony Adams၊ ဗီယာရာ Vieira တို့နောကျပိုငျး အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ကစားသမားတျောတျောမြားမြား ခနျ့အပျခံခဲ့ရပမေယျ့လညျး ထူးထူးခွားခွား အောငျမွငျမှုတော့ မရခဲ့ပါဘူး။ တကယျလို့ အိုဇေးလျသာ အာဆငျနယျအသငျးခေါငျးဆောငျသဈဖွဈလာခဲ့ရငျ တိုနီအဒမျ၊ ဗီယာရာ တို့ရဲ့ခွရော နငျးနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .